ETshayina Isikhwebu seFurfural kunye nesikhwebu sombona sivelisa abavelisi benkqubo yoboya kunye nababoneleli |IJINTA
Izixhobo eziqulathe izixhobo zotyalo lwezityalo zePentosan (ezifana nesikhwebu sombona, amaqokobhe embewu yomqhaphu, iihuli zerayisi, i-sawdust, umqhaphu weplanga) ziya kugalela ihydrolysis zibe yipentose ngokutyibilika kobushushu obuthile kunye necatalyst, iiPentoses zishiya iimolekyuli ezintathu zamanzi ukuze zenze ifurfural.
Isikhwebu sombona sisetyenziswa zizinto eziqhelekileyo, kwaye emva koluhlu lwenkqubo olubandakanya Ukuhlanjululwa, ukutyunyuzwa, kunye ne-acid hydrolysis, i-distillation ye-mash, i-neutralization, i-dewatering, i-refining ifumane i-furfural efanelekayo ekugqibeleni.
"Inkunkuma" iya kuthunyelwa kwibhoyila yokutsha, uthuthu lunokusetyenziswa njengento ezaliswe ziziseko okanye izinto eziphilayo.
Ngenxa yokuba i-furfural ine-aldehyde kunye ne-dienyl ether amaqela asebenzayo, i-furfural ineempawu ze-aldehydes, i-ethers, i-dienes kunye nezinye iikhompawundi, ngokukodwa ezifana ne-benzaldehyde.Phantsi kweemeko ezithile, i-furfural inokuthi yenzeke ngolu hlobo lulandelayo lwekhemikhali:
I-Furfural i-oxidized ukuvelisa i-maleic acid, i-maleic anhydride, i-furoic acid, kunye ne-furanic acid.
Kwinqanaba legesi, i-furfural ifakwa ioksijini yi-catalyst ukuvelisa i-anhydrous malic acid.
I-furfural hydrogenation inokuvelisa i-furfuryl alcohol, i-tetrahydrofurfuryl alcohol, i-methyl furan, i-methyl tetrahydrofuran.
I-Furan inokwenziwa ngomphunga we-furfural kunye nomphunga wamanzi emva kwe-decarburization kunye ne-catalyst efanelekileyo.
I-Furfural ifumana impendulo ye-Conicaro phantsi kwesenzo se-alkali eyomeleleyo ukuvelisa i-furfuryl alcohol kunye ne-sodium furoate.
I-Furfural inokungena kwi-Boqin reaction phantsi kwesenzo se-fatty acid ityuwa okanye isiseko se-organic kunye ne-condense nge-anhydride ye-asidi ukwenza i-furan acrylic acid.
I-Furfural i-condensed kunye ne-phenolic compounds ukuvelisa i-thermoplastic resin;idityaniswe ne-urea kunye ne-melamine ukwenza iplastiki;kwaye ijinja ngeacetone ukwenza intlaka yefufurone.
1. Ingasetyenziselwa ukukhupha isinyithi esinzima kumanzi amdaka, kwaye ingasetyenziselwa ukuthintela amashiti entsimbi ashushu abhityileyo ukuba anganamathelani.
2. Ingasetyenziselwa ukuveliswa kwekhadibhodi, ibhodi ye-samente kunye nezitena ze-samente, kwaye ingasetyenziselwa njenge-filler yeglue okanye i-paste.
3. Inokusetyenziswa njenge-feed premix, i-methionine, i-lysine, i-lysine protein powder, i-betaine, amalungiselelo ahlukeneyo obumba, i-antifungal agents, iivithamini, i-phospholipids, i-phytase, i-flavoring agents kunye ne-madurin, ukhuseleko I-enzyme eqhelekileyo i-choline chloride, njl., izongezo zezilwanyana zezilwanyana. , abathwali bezondlo, banokuthatha indawo yomgubo wesibini, kwaye ikwayenye yezinto eziphambili zokuvutshelwa kweemveliso zebhayoloji.
4. Isetyenziselwa ukucubungula i-furfural kunye ne-xylitol.
Ngaphambili: Inkqubo yokuvelisa i-hydrogen peroxide
Okulandelayo: Inkqubo yokuvelisa i-Ethanol